Monday, May 20th, 2019 - 13:26:58
Sunday April 28, 2019 - 15:32:21 in Wararka by Hussein Hadafow
Waxaa shalay garoonka xarunta degmada Cabdicasiis si rasmi ah uga furmay tartanka xiddigaha kubadda Gacanta 2019, waxaana furitaanka tartanka kasoo qayb galay masuuliyiinta Xiriirka kubadda Gacanta , maamulka Isboortiga degmada Cabdicasiis, masuuliyi
Waxaa shalay garoonka xarunta degmada Cabdicasiis si rasmi ah uga furmay tartanka xiddigaha kubadda Gacanta 2019, waxaana furitaanka tartanka kasoo qayb galay masuuliyiinta Xiriirka kubadda Gacanta , maamulka Isboortiga degmada Cabdicasiis, masuuliyiin ka socotay xiriirada kubadda Kolayga iyo Laliska iyo marti sharaf kale.
Guddoomiyaha Xiriirka soomaaliyeed Mudane Maxamed Xuurshe Xasan ( Eenoow) oo tartanka daah furay ayaa sheegay tartankan uu ka mid yahay qorshaha xiriirka Soomaaliyeed kubadda Gacanta kaasoo doonayaan in ay joogto ka dhigaan, waxaana si gaar ah fursad loogu siinayaa cyaartoyda da’yarta si ay usoo bandhigaan tayadoodalooguna xulo Xulka qaranka qyabtiisa da’yarta.
Guddoomiye Eenoow ayaa dhanka kale u mahad celiyay maamulka degmada Cabdi-casiis oo usuurtogeliyayI n ay xaruntooda ku qabsadaan maadaama garoonka Wiish uu dayactir ku socdo.
Tartankan oo ay ka qayb galayaan lix koox oo ku cayaaraha magacyo shirkadoganacsi iyo iskuuulo, waxaa loo cayaarayaa qaab hal is arag ah, waxaana qayb galaya kooxaha Astaan Sports, Alhudda , Banadir Zone, General Daud GYM , Muqdisho Cable iyo Umah Hospital.
Kulanak koowaad ee tartanka oo aad u adkaa waxaa shalay ku loolamay BanadirZone iyo Al Huda waxaana waqtigii loogu talo galay 37-35 guusha ay ku raacda Xiddigaha Banadir Zone.
Maanta waxaa ballansan Xiddigaha ku cayaaraya Astaan Sports vs Muqdisho Cable oo kamid ah shirkadahda warbaahinta.